ब्लूमबर्ग २०२० को लागि अन-स्क्रिन टच आईडीमा सामेल हुन्छ आईफोन समाचार
ब्लूमबर्ग २०२० को लागि अन-स्क्रिन टच आईडीमा सामेल हुन्छ
दुई वर्ष अघि पहिलोपटक टच आईडीको साथ एप्पलले डिस्पेन्स गर्यो जब आईफोन एक्स प्रस्तुत गर्‍यो, र प्रणालीको पक्षमा गरे "सुरक्षित, अधिक भरपर्दो र छिटो ”जस्तो कि टिम कुकले नयाँ अनुहार पहिचान प्रणाली, फेस आईडी प्रस्तुत गरे। त्यसबेला देखि धेरै प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ अनलक मेकानिजमको बारेमा गुनासो गरिरहेका छन्, "पुरानो" टच आईडी मन पराउँदै।
के एप्पल फिर्ता जान्छ र फिंगरप्रिन्ट पुन: प्राप्ति गर्दछ हामीलाई पहिचान गर्न र हाम्रो आईफोन अनलक गर्न? अफवाहहरू यस दिशामा गएको देखिन्छ, र अब ब्लूमबर्ग, जो सधैं एक पर्याप्त विश्वसनीय स्रोत हो, यस प्रवृत्तिसँग मिल्छ। यो सुनिश्चित गर्दै कि २०२० मा हामीसँग स्क्रिन मुनि टच आईडी भएको आईफोन हुनेछ.
किन केही प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुहार आईडी भन्दा टच आईडी राम्रो छ? धेरैले पहिले एक छिटो छ भनेर आश्वासन दिन्छन्, अन्य अनुहार आईडी धेरै अवसरहरूमा असफल हुन्छन्। मेरो हातमा आईफोनको दुई पुस्ता र फेस आईडीको साथ आईप्याड प्रो पछि म टच आईडीलाई बिर्सन्छु, थप के हो, म टच आईडी भन्दा situations 99% अवस्थाहरूमा अनुहार आईडी रुचाउँछु। मेरो अनुहारको नजिकै आईफोनको साथ ओछ्यानमा हुँदा मसँग एउटा समस्या छ जुन यसलाई थोरै टाढा सारेर द्रुत रूपमा हल गरिएको छ।
मैले सुरुमा केहि दिन अघि भनेको थिएँ पोडकास्ट यस मौसममा, म केवल अनुहार आईडी छोड्छु पूर्ण स्क्रिनको लागि टच आईडीको पक्षमा, कुनै निशान बिना। स्क्रीन अन्तर्गत एक एकीकृत फिंगरप्रिन्ट सेन्सर शीर्षबाट निशान हटाउन सक्छ उस्तै, जहाँ अनुहार आईडीको सेन्सर, emitters र क्यामेरा छन्। तर त्यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले हामीले अहिले सम्म हेर्दै गरेको भन्दा अझ राम्रो काम गर्नुपर्दछ, र स्क्रिनको एक खास क्षेत्र मात्र होइन तर फराकिलो क्षेत्रमा पनि कि यो औंला ठिकसँग नराखेर यत्तिको असफल हुँदैन। यो कहाँ हुनुपर्छ।
यद्यपि, ब्लूमबर्गले भनेको कुराको कुनै अर्थ छैन, किनकि यसले यो सुनिश्चित गर्दछ एप्पल फेस आईडी राख्न चाहन्छ, ताकि आईफोन दुबै पहिचान प्रणाली होस्। यदि यो सत्य हो भने, हामी पायदानलाई कायम राख्नेछौं, जसले टर्मिनलको निर्माण मूल्य अधिक महँगो पार्नेछ (पर्दा मुनि सेन्सर ठीक सस्तो हुनेछैन) प्रतिफलमा उल्लेखनीय सुधार नगरी। यसको विपरित, यसले भावना उत्पन्न गर्न सक्दछ कि न त प्रणाली पर्याप्त विश्वसनीय छ। ब्लूमबर्गका अनुसार हामीले यसलाई २०२० वा सायद २०२१ मा देख्नेछौं। हामी हेर्ने छौं कि कहाँ चीजहरू सकियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » ब्लूमबर्ग २०२० को लागि अन-स्क्रिन टच आईडीमा सामेल हुन्छ
यदि तपाइँ दुबै महान राख्नुहुन्छ। प्रत्येक एक अनलक गर्न को लागी प्रणाली राख्न को लागी। म व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि कुराको लागि अनुहार आईडी परिवर्तन गर्दिन।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड अक्टोबरमा २,००० युरोको लागि स्पेनमा आइपुग्छ
निक्कीले २०२० को लागि सम्भावित आईफोन एसईको बारेमा कुरा गर्यो